Ronald Koeman Oo Ka Difaacay Real Madrid Jurgen Klopp: "Wuxuu Qiimo Tirayaa Koox Weyn" - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRonald Koeman Oo Ka Difaacay Real Madrid Jurgen Klopp: “Wuxuu Qiimo Tirayaa Koox Weyn”
Ronald Koeman Oo Ka Difaacay Real Madrid Jurgen Klopp: “Wuxuu Qiimo Tirayaa Koox Weyn”
April 10, 2021 admin Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa dhawaan ku dhaleeceeyay Real Madrid inay ku ciyaareyso garoonkeeda ku meel gaarka ah ee Estadio Alfredo di Stefano madaama shaqo dayactir ah ay ku socoto garoonkooda weyn ee Santiago Bernabeu.
Klopp ayaa garoonka ay Madrid ku ciyaareyso xilli ciyaareedkan ku tilmaamay garoon tababar isagoo xusay inay aheyd inaan lagu dheelin garoon sidaas u yar kulan Champion League ah.
Laakiin tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa difaacay Los Blancos isagoo yiri:
“Wuxuu isku dayayaa inuu qiimo tiro koox weyn oo sida Madrid oo kale ah, kuwaasoo doortay waqtigaan madaama aan taageerayaal loo ogoleyn garoomada inay shaqo dayactir ah ka qabtaan garoonkooda weyn” ayuu yiri Koeman.
“Waa ay u barteen inay ku ciyaaraan garoonkaan, kooxaha ka soo horjeeda waa ay ku qasban yihiin inay ku dheelaan halkaas, anigana dhibaato kuma qabo.”
Koeman ayaa sidoo kale sheegay inuusan aaminsaneyn in kulanka caawa ee El Clasico inuu saameyn weyn ku yeelan doono tartanka horyaalka.
“Natiijada ma ahan mid wax go’aamin doonta sababtoo ah ka dib kulanka El Clasico waxaa jiri doona kulamo badan oo la ciyaarayo, waana ay adag tahay in koox walba ay badiso kulamadaas oo dhan” ayuu sharaxaad ku bixiyay Koeman.
“Kooxda badisa El Clasico waxay heli doontaa niyad dhis aad u weyn.”